Ireo tanora dimy mianadahy nofaniny manokana momba ny fahaiza-mitarika no tonga teny an-toerana nampianatra ireo kilonga madinika momba ny fahadiovana ka anisan’ny nampianarina azy ireo ny resaka fanasan-tanana amin’ny savony sy ny fiborosiana nify in-telo isan’andro. Noho ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny mitady ny hanin-ko hanina isan’andro mantsy dia betsaka amin’ireo ankizy madinika eny amin’ity toerana ity no tsy mahalala loatra ny resaka fahadiovana. Ny 80 %-n’ireo mponina mantsy dia miaina anaty fahasahiranana avokoa, raha araka ny fanadihadiana natao. Miisa 50 ireo ankizy madinika nahazo tombontsoa izay mbola nozaraina borosy nify ihany koa. Fa ankoatra izay dia tanora lahy sy vavy miisa 10 teo ihany koa no nanaovana fanentanana momba ny fitiliana ny otrikaretina Vih/SIDA sy ny aretina azo avy amin’ny firaisana ara-nofo, niarahana tamin’ireo mpianatra ho farmasiana eo anivon’ny Humapharma. Tsiahivina moa fa antom-pijoroan’ny fikambanana Daholo ny hanangana tanora mahay mitarika, vonona ny hiotra sy hiady amin’ny fiainana ary hanampy ireo zandrikely aty aoriana. Folo mianadahy izy ireo hatreto no efa nampianarin-dRtoa Mihanta Ramanantsoa raha vao tamin’ny volana janoary lasa teo no niorina ny fikambanana. Ezahina hitarina any amin’ny faritra hafa ny hetsika.